အမေစုကဗျာပိုင်ဆိုင်သွားသူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားတွေကြောင့် လေလံအောင်သူ ကို အားနာမိတယ်လို့ မောင်မောင်အေးပြောပြီ – Zartiman
အမေစုရဲ့ကဗျာကိုပိုင်ဆိုင်သွားသူကတော့ လတ်တလောလိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နေတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သူကတော့ လက်ရှိ စီးပွားရေးလောကမှာ ကျိကျိတက်ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုစိတ်မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားကောင်း စစ်စစ် တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း မောင်မောင်အေးကတော့ လေလံအောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် အနည်းငယ်မျှ ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
လူမှု ကွန်ရက်ပေါ်မှာ အတော်လေးဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေစုရဲ့လက်ရေးမှုကဗျာကတော့ မနေ့ကည(၉) နာရီအချိန်မှာပဲ သိန်း ပေါင်း (၂၄၀၀) နဲ့ လေလံပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ လူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရ လေလံအောင်သွားတဲ့သူကို စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြသလို အမျိုးမျိုးသောသတင်းအမှားတွေလည်း ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။မောင်မောင်အေးကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” လိုင်းပေါ်တက်နေတဲ့ ပုံတစ်ပုံမှာ လေလံအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်းရယ်… ။
အဲ့ဒီကဗျာကို ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ယူသွားမလို့ ကားထဲထည့်ကာနီး ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့အမက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့သွားတာနဲ့ မှတ်တမ်း တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ ဓါတ်ပုံပေးရိုက်လိုက်တာပါ…အဲ့အချိန်တုန်းကလည်း လေလံဈေးက သိန်း (၁၃၅၀) ထိပဲရှိသေးပြီး ဘယ်သူ့ဆီ ရောက်မလဲမသိသေးတဲ့အချိန်ပါ…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုင်းပေါ်မှာ သတင်းမှားတွေပျံ့နေတဲ့အတွက် တကယ်လေလံအောင်တဲ့သူကိုလည်း ဒီနေရာကနေ အားနာမိကြောင်းတောင်းပန်အပ်ပါတယ်…။
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေနဲ့ နားလည်နိုင်ပြီး ဘာမှ စိတ်မရှိမှာသိနေပေမင့် နောက်ဆိုပိုဆင်ခြင်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အမစေုရဲ့ကဗြာကိုပိုငျဆိုငျသှားသူကတော့ လတျတလောလိုငျးပျေါမှာ ပြံ့နတေဲ့သူတှေ တဈယောကျမှ မဟုတျပါဘူးတဲ့။ သူကတော့ လကျရှိ စီးပှားရေးလောကမှာ ကြိကြိတကျခမျြးသာသူတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ထငျပျေါကြျောကွားလိုစိတျမရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားကောငျး စဈစဈ တဈယောကျဖွဈကွောငျး မောငျမောငျအေးကတော့ လလေံအောငျသူနဲ့ပတျသကျပွီးစိတျဝငျစားနတေဲ့ပရိသတျကွီးအတှကျ အနညျးငယျမြှ ဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
လူမှု ကှနျရကျပျေါမှာ အတျောလေးဟိုးလေးတကြျောဖွဈခဲ့တဲ့ အမစေုရဲ့လကျရေးမှုကဗြာကတော့ မနကေ့ည(၉) နာရီအခြိနျမှာပဲ သိနျး ပေါငျး (၂၄၀၀) နဲ့ လလေံပွီးဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ လူတို့ရဲ့သဘောဆန်ဒအရ လလေံအောငျသှားတဲ့သူကို စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျနကွေသလို အမြိုးမြိုးသောသတငျးအမှားတှလေညျး ထှကျပျေါလကျြရှိပါတယျ။မောငျမောငျအေးကတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ” လိုငျးပျေါတကျနတေဲ့ ပုံတဈပုံမှာ လလေံအောငျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျမဟုတျကွောငျးရယျ… ။
အဲ့ဒီကဗြာကို ပှဲအတှကျပွငျဆငျဖို့ယူသှားမလို့ ကားထဲထညျ့ကာနီး ကိုယျနဲ့ခငျတဲ့အမက တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျတှသှေ့ားတာနဲ့ မှတျတမျး တငျခငျြတယျဆိုလို့ ဓါတျပုံပေးရိုကျလိုကျတာပါ…အဲ့အခြိနျတုနျးကလညျး လလေံဈေးက သိနျး (၁၃၅၀) ထိပဲရှိသေးပွီး ဘယျသူ့ဆီ ရောကျမလဲမသိသေးတဲ့အခြိနျပါ…. ဘာပဲဖွဈဖွဈ လိုငျးပျေါမှာ သတငျးမှားတှပြေံ့နတေဲ့အတှကျ တကယျလလေံအောငျတဲ့သူကိုလညျး ဒီနရောကနေ အားနာမိကွောငျးတောငျးပနျအပျပါတယျ…။
အဲ့ဒီပုဂ်ဂိုလျကွီးအနနေဲ့ နားလညျနိုငျပွီး ဘာမှ စိတျမရှိမှာသိနပေမေငျ့ နောကျဆိုပိုဆငျခွငျပါ့မယျခငျဗြာ” ဆိုပွီးရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
ကမ္ဘာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ဆယ်ကျော် သက် မိန်းကလေး (၂၄) ရာခိုင်နှုန်း မှာ ဂျပုမ များ ဖြစ်နေရသည့် အကြောင်းရင်း